बल्ल मुख खोले नायक आकाश श्रेष्ठले,भेने “पुजाको खुशी नै मेरो सब थोक हो”(भिडियो सहित) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बल्ल मुख खोले नायक आकाश श्रेष्ठले,भेने “पुजाको खुशी नै मेरो सब थोक हो”(भिडियो सहित)
नायिका पुजा शर्माको जन्म २०४९ बैशाख् १८ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भएको हो । उनले नेपाली कथानाक चलचित्र थ्रि लबरबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । चलचित्र थ्रि लबर को निर्देशक चलचित्र पत्रकार सुरेश दर्पन पोख्रेल हुन । नायिका पुजा शर्माको स्टारडम कति छ ? उनकै कारण चलचित्र चल्ने सम्भावना छ त ? यसअघिका चलचित्र उनकै कारण चलेका छन् ?
उनले चलचित्र अझैपनि, चंखे शखे पंखे, प्रेम गीत, मधुमास, म यस्तो गीत गाउँछु र रामकहानीमा काम गरिसकेकी छिन् । उनको अर्को चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन को सम्पूर्ण निर्माण कार्य सकिएर प्रदर्शनको तयारीमा छ ।
पुजाका अहिलेसम्मका चलचित्र हेर्ने हो भने व्लकवस्टर चलचित्र प्रेमगीत मात्रै हो । पुजा शर्मालाई सुहाएको जोडी नायक प्रेम गीतमा प्रदिप खड्का, म यस्तो गीत गाउछुमा पल शाह र सबै भन्दा सुहाएको र दर्शकले मन पराएको जोडी राम काहानीमा आकश श्रेष्ठसँग हो । भिडियो सहित
चर्चित गायिका प्रविशा अधिकारीको बिवाहमा जे देखियो (भिडियो सहित)
आफुले माया गरेर विवाह गरेकी श्रीमती आफ्नै साथीले लिएर गएको भन्दै एक युवक रुँदै मिडिया(हेर्नुहोस् भिडियो )
‘मन्त्रि प्रभु शाहले मेरो घर भत्कायो अब हामीलाई मा’र्छ’न भन्दै श्रीमान श्रीमती रुदै मिडियामा’ (भिडियो हेर्नुस्)